Translation of Administration: Myanmar (Burmese)	Glossary
Filter ↓ • Sort ↓ • All (2,619) • Untranslated (769) • Waiting (0) • Fuzzy (3) • Warnings (0)
Welcome to %s. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!	 မ​ဂင်္လာ​ပါ​။​ သင်၏ ပထမဆုံး စာမူဖြစ်ပါသည်။ ပြုပြင် ဖြည့်စွက်ပါ (သို့) ဖျက်ပါ။ ပြီးလျှင် ဆိုဒ်ရေးသားခြင်းအား စတင်နိုင်ပါပြီ။​ <h1>အ​မှာ​စာ</h1><br><br>ဒီ​မြန်​မာ​လို​ WordPress Package ကို​ <a href="http://www.ဧ​ရာ.com">ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ်​</a>စာ​လုံး​နဲ့​ရေး​ထား​တာ​ပါ​။​ Ayar-Web-Kit Plugins ကို သုံးဖို့ အကြံပြုပါသည်။ ဒီပလပ်အင်ဟာ မြန်မာလို ဘလော့ဂ်ရေးဖို့ လိုအပ်သမျှကို ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ ပလပ်အင် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။	 Details
translators: first post content, %s: site link
2014-09-04 20:11:24 GMT
%s​ အ​မျိုး​အ​မည်ကို​ ​အ​သစ်​မ​ြဖည့်​စွက်​နိုင်​ပါ​။​ ​တစ်​ေယာက်​ေယာက်​က​ ​ြပု​ြပင်​ေန​သည်​။
Singular: %s block not updated, somebody is editing it.
Plural: %s blocks not updated, somebody is editing them.
2011-03-18 09:03:46 GMT
Search Requests	 ရှာဖွမေှုရလဒ်များ	 Details
2014-09-04 20:11:29 GMT